Kuxoshwe amaphoyisa angu-12 ngenkohlakalo | Isolezwe
Kuxoshwe amaphoyisa angu-12 ngenkohlakalo
Izindaba / 14 November 2017, 09:49am / INTATHELI YESOLEZWE
Kuxoshwe amaphoyisa angu-12 atholwe enamacala enkohlakalo. Isithombe: Leon Lestrade/ANA
KUXOSHWE amaphoyisa akwaSAPS angu-12 alahlwe ngamacala enkohlakalo ngesikhathi kunohlelo lokuqondiswa kobugwegwe ngaphakathi kulo mbutho ngezehlo zenkohlakalo ebezenzeka emngceleni waseKosi Bay naseGolela.
Kulo mngcele bekuweliswa izimoto ezingamaveni ezebiwe kuleli ziyiswe eMozambique.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uBrigadier Jay Naicker, uthe amaphoyisa aboshwe maphakathi nonyaka kanti ngemuva kophenyo olunzulu abe esexoshwa emsebenzini ngoLwesihlanu.
Ibamba likaKhomishana wamaPhoyisa KwaZulu-Natal, uMajor General Bheki Langa, lincome umphakathi waseMkhanyakude ngokuqwashisa amaphoyisa nokubika ngenkohlakalo yamaphoyisa athintekayo.
Uthe bafuna ukuqinisekisa umphakathi ngokuthi bazimisele ngokulwa nenkohlakalo eyenziwa amaphoyisa.
UMengameli Jacob Zuma wake waya eMkhanyakude walalela izikhalo zomphakathi ngobugebengu bokuweliswa kwezimoto emngceleni ziyiswe eMozambique.
Umphakathi wakule ndawo wawuhlale ukhala ngokuthi kwebiwa izimoto zawo ziweliswe ziye eMozambique noma utholakala umkhondo wokuthi zingakuphi kuba wumqansa ukuthi zibuyiswe zize kwelakuleli.
UNaicker uthe yize amaphoyisa esexoshiwe ngemuva kohlelo lwangaphakathi lokuqondiswa kobugwegwe kodwa icala lawo lisaqhubeka enkantolo.
Umxhumanisi wenhlangano elwa nobugebengu emphakathini, iCommunity Policing Forum (CPF) eNgwavuma, uMnuz Joseph Ngubane, uthe baswele imilomo eyinkulungwane yokubonga kuhulumeni ngokubambisana nabo ekulweni nobugebengu obunje.
“Sasingaboni ukuthi kwenzekani, sizitshela ukuthi uhulumeni awenzi lutho kanti uqoqa ubufakazi. Lolu hlobo lobugebengu selungcono kakhulu kodwa eManguzi kusadingeka ukuthi kuqiniswe umkhankaso ukuze buqedwe nya lobu bugebengu,” kusho uNgubane.
Uthe yize kukhona amaphoyisa asexoshiwe kodwa zisekhona ezinye iziteshi okusamele uhulumeni azibhekisise ngoba nazo zinawo amaphoyisa aqhuba izenzo zenkohlakalo.
“Lokhu siyethemba ukuthi kuzokhombisa nabanye ukuthi akekho ongaphezu komthetho,” kusho uNgubane.